Filimada la daawado sida lammaane: kee baa ugu fiican? | I sii wakhti firaaqo
Gabriela moran | | cine, Shineemo naxdin leh
Mid ka mid ah waxqabadyada ugu faa'iidada badan in la sameeyo sida lamaane ayaa ah daawashada filimada raaxada sariirta. Waxaad u baahan tahay inaad samayso xulasho labadiinaba xiisaynaysa si looga hortago in labadiinuba ay hurdaan. Waan ognahay sida ay u adkaan karto in lagu qanciyo lamaanahayaga inuu arko filimka aan rabno, ama sida kale. Inta maqaalkaan ku jiro waxaan soo bandhigayaa a xulashada filimada si loo daawado sida lammaane iyada oo aan qofna u dhiman caajis.
Waxaa jira noocyo badan, laakiin guud ahaan waxaa jira laba kiciya xiisaha ragga iyo dumarka labadaba: majaajilada jaceylka iyo filimada naxdinta leh! Ma jiraan wax la mid ah oo la isku koolkooliyo waqtiga ugu shakiga badan ee laga naxo shirqool argagax leh! Dhinaca kale, majaajilada jacaylku waxay abuuraan jawi madadaalo leh, dabacsan iyo jaceyl. Xulashada waxaa ka mid ah darajada la siiyay IMDb
Waxaad rabtaa daawo filimadaan bilaash? Isku day Amazon Prime Video waxaadna arki doontaa qaar badan oo iyaga ka mid ah
1 Jacayl waalan oo doqon ah
2 Faylka Warren: Khasaaraha
3 Iyadoo ay xaq u leedahay inay xoqdo
4 Xarunta agoonta
5 Iyadoo aan waajib ahayn
6 Dahsoon (Habeenka Jinniga)
7 Shaqadu waa socotaa… Filimmo la daawado sida lammaane ahaan!
Jacayl waalan oo doqon ah
Majaajilada jaceylka ah ee la sii daayay 2011 iyo waxaa jilaya Emma Stone, Ryan Gosling, Julianne More, iyo Steve Carell. Sheekadu waxay ka sheekaynaysaa lammaane ku jira dacwad furriin oo ay bilaabeen qirasho gaalnimo oo ay xaaskoodu qirtay. Ka dib markii aan maqlay warka burburka, Cal (Steve Carell) wuxuu la kulmaa dhallinta khiyaanada (Ryan Gosling) oo ka caawiya inuu ka baxo xaaladdiisa murugsan oo la wadaago xeeladihiisa sasabashada ugu fiican.
Cal wuxuu dib u helay kalsoonidiisii ​​naftiisa wuxuuna bilaabay guushii dumarka: wuxuu la kulmaa haween badan oo ku jira xaalado aad u qosol badan, oo uu ka mid yahay macallinka mid ka mid ah carruurtiisa.
Intaa ka dib Jacob (Ryan Gosling) wuxuu la kulmay Hanna (Emma Stone) si kadis ah kaas oo uu si toos ah ugu kaxeeyo aqalkiisa isaga oo ka mid ah guulahiisa badan. Wax yar ka hor, waxay ku dhacaan jacayl waxayna ogaadaan xaqiiqada niyadjabsan: Hanna waa gabadhii Cal!
Sida iska cad Cal wuxuu ka soo horjeedaa xiriirka gabadhiisa ay la leedahay casanova wuxuuna bilaabayaa isku dhac ku dhammaada ogaanshaha dareenka dhabta ah ee dhammaan jilayaasha.
Ma joojin karaan wada daawashada filimkan, aad bay u qosli doonaan!
Faylka Warren: Khasaaraha
Filim argagax leh
Waxaa u waxyoonay sheeko run ah oo ku saabsan beer halkaas oo ifafaale aan caadi ahayn ay bilaabaan inay dhacaan. Waxaa lagu sii daayay tiyaatarada 2013 waxaana lagu calaamadeeyay iBilowga filimaan taxane ah oo ka kooban dhowr shirqool oo ku saleysan baaritaannada baare caan ah oo caan ah: Warrens.
Qoysku wuxuu u guuraa beer qurux badan oo ay si degdeg ah uga dhacaan waxyaalo yaab leh oo argagax geliya: ruuxyada armaajooyinka ku jira, calaamado aan la sharrixi karin oo jidhka ku yaal, gardarro toos ah oo qof ku hayo xubin qoyska ka mid ah, iwm. Muddo ka dib, hooyadu waxay la xiriirtaa nimankii Warren, kuwaas oo ah dhakhaatiir baarayaal ah oo baara kiisaska aan caadiga ahayn.
Isla markiiba Warrensku waxay ogaadaan waxyaabo badan oo aan caadi ahayn baaritaankooduna wuxuu daaha ka qaadayaa kiiska haweeney lagu eedeeyay sixir oo ku noolayd beerta. Waxay wiilkeeda u bixisay inuu u bixiyo shaydaan si uu hadhow isdilo. Saaxiraddii su'aashu waxay qabsatay jirka xubnaha qoyska waxyeelladu gaartay waxayna Warrens go'aansadeen inay ku dhaqmaan ka -saaris si ay u saaraan ruuxa sharka ah.
Waxyaabo taxane ah oo '' haunted '' ah ayaa soo ifbaxaya kuwaas oo ah qaybta aasaasiga ah ee filimada kale ee qayb ka ah xayeysiiska. Cajaladani waxay hubaal ahaan kugu hayn doontaa shaki joogto ah. Ma joojin kartid daawashada tan ama filimada inteeda kale ee xayeysiiska!
Magacyada kale ee ku jira sheekada oo dhammaystiran waa kuwan soo socda: Anabelle (2014), Faylka Warren: Kiiska Enfield (2016), Annabelle: Abuuritaanka (2017) iyo The Nuun (2018). Intaa waxaa sii dheer, filimaan cusub ayaa lagu dhawaaqay 2019.
Iyadoo ay xaq u leedahay inay xoqdo
Waxaa jilaya Justin Timberlake iyo Mila Kunis. Sheekadu waxay noo sheegaysaa nolosha Jamie, oo ah indheer-garadka ugu sarreeya New York iyo agaasimaha farshaxanka ee fadhigiisu yahay Los Angeles oo lagu magacaabo Dylan, kaasoo la siiyo fursad uu ugu shaqeeyo joornaal weyn oo New York ah. Jamie wuxuu mas'uul ka yahay inuu ka dhaadhiciyo Dylan inuu qabto shaqada wuxuuna u soo bandhigayaa inuu u kaxeeyo si uu u arko magaalada Manhattan.
Waxay isla markiiba sameeyaan xiriir waxayna noqdaan saaxiibo. Waxay ka hadlaan mowduucyo isku dhow waxayna labaduba isku raaceen in galmadu aysan ku jirin dareen ama ballanqaadyo, sidaa darteed soo jiidashada ayaa la wada baabbi'iyaa waxayna go'aansadaan inay galmo sameeyaan oo ay bilaabaan nooc xiriir ah ballanqaad la'aan halkaas oo ay ku leeyihiin furfurnaan ay kaga hadlaan dhammaan waxyaabaha aan waafaqsanayn iyo rabitaanka diyaaradda galmada.
Dhowr kulan, Jamie wuxuu ogaaday in tani aysan ahayn waxa uu raadinayo wuxuuna go'aansaday inuu soo afjaro firfircoonida oo uu ku noqdo saaxiibo "caadi ah". Waxay la kulmeysaa nin kale oo ay bilawdo shukaansiga si kooban marka uu kala tago iyada hore. Isla markiiba saaxiibkeed Dylan wuxuu ku casuumay xaflad qoys oo ka baxsan magaalada si ay u mashquuliso, laakiin safarkaas wuxuu ka dhalan lahaa wax ka badan uun safar usbuuca ...
Waa a Waxsoosaarka Isbaanishka oo soo baxay sanadkii 2017 oo ka sheekeynaya sheekada Laura agoon ah oo la korsaday markii ay yarayd. Sannado ka dib, waxay go’aansatay inay ku laabato agoontii ay ku noolayd carruurnimadeedii iyada oo ay weheliso ninkeeda iyo wiilkeeda, oo isna la korsaday laakiin aan aqoon u lahayn. Laura waxay qorshaynaysaa inay dib u furto xarunta agoonta si ay u noqoto hoyga taageerada carruurta naafada ah. Shaqaale bulsho oo lagu magacaabo Benigna ayaa sharxaya in Simón, wiilka Laura, uu qabo HIV.
Dhanka kale, Simón wuxuu waalidkiis u sheegaa inuu leeyahay saaxiib cusub oo la yiraahdo Tomás kaasoo had iyo jeer xirta maaskaro.
Inta lagu guda jiro xafladda furitaanka xarumaha cusub Simón iyo Laura waxay ka wada hadlaan; sidaa darteed ilmuhu wuu cararaa oo hooyadiis ka qariyaa. Intii ay Laura raadinaysay, waxay la kulantay wiil leh maaskaro jawaan ah oo riixaya oo ku xiraya suuliga dhexdiisa. Markii uu baxay, wuxuu ogaaday in wiilkiisii ​​la waayay oo uusan awoodin inuu helo. Lix bilood ka dib, wiilka weli waa la la'yahay Laurana waxay mar kale la kulantay Benigna, oo la kulantay shil dhimasho leh oo daaha ka qaaday runta nolosheeda: waxay lahayd wiil la yiraahdo Tomás wuxuuna ka shaqeeyay xarunta agoonta ee Laura hadda leedahay.
Laura waxay raadinaysaa caawimaad dhexdhexaad ah si ay u raadiso Simón waxayna u sheegaysaa masiibadii weynayd ee meeshaas ka dhacday sanado ka hor. Waxay aakhirkii ogaatay hab ay mar labaad ku heli karto wiilkeeda waxayna ogaatay runta xun ee wixii ku dhacay Simon.
Iyadoo aan waajib ahayn
Majaajilo jaceyl ah waxaa jilaya Ashton Kutcher iyo Natalie Portman. Laba saaxiibo carruurnimo ayaa mar kale kulma waxayna ku dhammaadaan habeen kulul oo galmo ah. Maalinta ku xigta waxay ogaadaan taas Uma baahna inay yeeshaan xiriir taasina ma aha waxa ay raadinayaan xilligan, sidaa darteed waxay go'aansadaan inay sii ahaadaan saaxiibo oo aan lahayn ballanqaadyo waaweyn.
Waxay u baxaan taariikh casho been abuur ah oo ay la leeyihiin aabaha Adam ee haweeneyda ah (Ashton Kutcher) oo la shukaansanaya saaxiibtiisii ​​hore iyo casha aad u qaas ah oo aan raaxo lahayn.
Waxay sii wadaan firfircoonida illaa Adam uu garto inuu jaceyl u qabo Emma (Natalie Portman) oo go'aansado inuu ka guuleysto, si kastaba ha ahaatee wuxuu helaa waa inuu ka sii fogeeyo. Emma waxay ku dhuumataa shaqadeeda isbitaalka ilaa ay ogaadaan in jaceylka ay isu qabaan aan la dafiri karin.
Dahsoon (Habeenka Jinniga)
Qaybta koowaad ee sheekada ayaa la sii daayay 2011 iyo dhagartu waxay ku qotontaa qoys uu wiilkoodu miyir -beel ku dhaco oo uu ruux xun galo. Aabaha iyo hooyadu waa Josh iyo Renai siday u kala horreeyaan. Qoysku waxay bilaabaan inay la kulmaan dhacdooyin argagax leh oo aan la macnayn karin. Lorraine, Josh hooyadeed, waxay u timid caawinta saaxiibkeed Elise Reiner: haweeney hadiyado gaar ah leh oo u heellan inay caawiso dadka ku jira xaalad quus ah. Waxay leedahay awood ay kula xiriirto dadka, ruuxyada, iyo jinniyada meel ka baxsan.
Markay Elise soo booqato wiilka yar ee la hadal hayo, waxay waalidiinta u sharaxaysaa in wiilkoodu uusan miyir -beel ku jirin. Laakiin waxay leedahay Awoodda saadaalinta astral inta lagu jiro hurdada oo aad uga fogaaday jirkaaga, taasina waa sababta uu u lumay dibna ugu soo noqon karin.
Lorraine ayaa shaaca ka qaaday in wiilkeeda Josh, oo ah aabaha qoyska, ayaa sidoo kale leh awood isku mid ah sidaa darteed waxay gaaraan go'aanka Josh u aado inuu ku helo wiilkiisa mid ka mid ah safaradaas. Dunida kale, wuxuu helaa wiilkiisa wuxuuna ogaadaa inay labadooduba ugaarsanayaan jinni ay u maareeyaan inay u baxsadaan.
Josh iyo wiilkiisuba way nabad qabaan! Si kastaba ha ahaatee, Elise waxay ogaataa run qabow oo nolosheeda qaali ku ah.
Sheekada ilaa iyo hadda waxaa ku jira afar filim oo Elise Reiner ay nagu weheliso safarro naxdin leh oo ay wajahayaan jinniyo arxan daran. Magacyada taxanaha ayaa ah Cutubka 2aad, Cutubka 3 iyo Furaha Dambe.
Shaqadu waa socotaa… Filimmo la daawado sida lammaane ahaan!
Ma jirto marmarsiiyo dambe! Ma jiri doonto baahi loo qabo in la seexdo ... Xulashada lagu soo bandhigay filimada si loo daawado sida lammaane, oo ay ku jiraan saddex majaajilo oo jaceyl ah iyo saddex filim oo argagax leh, ayaa na siinaya ikhtiyaarka ugu habboon ee aan ku maaweelin karno nafteenna. Kaliya go'aanso: Argagax ama jaceyl?
Samee salool iyo cabbitaan nasasho leh! Ku raaxayso filimada aad dooratay galabtii ama marathon -ka wiigga.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » cine » Aflaanta la daawado sida lamaane